Taariikhda xidiga kubada cagta ee Cristiano Ronaldo –
Home Cristiano Ronaldo Taariikhda xidiga kubada cagta ee Cristiano Ronaldo
Xariif.net-Halkan waxan kusoo gudbin doonaa Taariikhda xidiga kubada cagta ee Cristiano Ronaldo, Qaybtii 1aad mar hadii aad maqashid magaciisa waad garaneysaan waa xidig caan ka ah Aduunka oo dhan magaciisa oo sadexan waxaa la yidhaahdaaoo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro wuxuu dhashay bishii February 5, 1985, Madeira, Portugal, magac hooyadii iyo aabihii Maria Dolores dos Santos Aveiro iyo José Diniz Aveiro.
Cristiano wuxuu leeyahay walaalka weyn, Hugo iyo laba gabdhood oo waawayn, Elma iyo Liliana Cátia. Magaciisa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka, Ronald Reagan, oo aabbihiis uu saameyn ku yeeshay.
Jazeerada Madeira ayaa sidoo kale aheyd meeshii Cristiano uu markii ugu horeysay ka bartay xirfadihiisa kubada cagta.
Waxa uu sannado hore u ciyaaray kooxdiisii ​​hore ee Nacional, iyo markii uu 12 sano jirsaday, wuxuu horay u magacaabay magaciisa isagoo ah mid ka mid ah xiddigaha ugu sareeya Madeira.
Ma aysan dheereyn ka hor inta uusan bilaabin inuu soo jiito kooxaha kale ee reer Portugal. Ciyaartoyda Sporting waxa ay ahaayeen Benfica, Cristiano iyo aabihiis oo ay raaceen wiil yar.
Si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii wuxuu doortay inuu u ciyaaro Sporting oo ah koox ay hooyadii jeceshlayd islamarkaana ay u raaci jirtay ilaa intii uu korayay , si uu ula ciyaarto sida Figo oo ahayd riyadii wiilkeeda.
Kadib markii uu arkay macalinkii hore ee Liverpool Gerard Houllier oo da’diisu tahay lix iyo toban jir, laakiin Liverpool ma aysan dooneynin inay la soo saxiixato xilligaas, sababtoo ah waxay u maleeyeen inuu yahay mid aad u da ‘yar wuxuuna u baahnaa waqti dheeri ah si uu u horumariyo xirfadiisa.
Si kastaba ha ahaatee, xagaagii 2003dii, markii Sporting uu ka horyimid Manchester United islamarkaana ka adkaaday, Cristiano ayaa soo jiitay tababaraha Manchester United Sir Alex Ferguson.
laso Qaybta 2aad Taariikhda Ronaldo